लामो द्वन्द्वपछि नेतृत्वमा पुग्दै काश्मिरी महिलाहरु, मोदी सरकारको एक्सनपछि चेलीहरुले नयाँ अवसर पाउँदैNepalpana - Nepal's Digital Online
नयाँ दिल्ली । दुई वर्षअघि भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू–काश्मिरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० लाई भारतको संविधानबाट हटाएपछि काश्मिरमा शान्ति र स्थिरता छाएको छ ।
दिनहुँ हुने प्रदर्शन, हिंसा र मारपिटको समाचार अहिले बन्द भएको छ । मोदी सरकारले काश्मिरलाई भारतका सबै राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडेर विभिन्न अवसरहरु सिर्जना गरेको छ । स्थानीय प्रशासनको मजबुत सुरक्षा व्यवस्था, भारतका अन्य राज्यसँग सिधा सम्पर्कले यहाँका महिलाहरु पनि बाहिर आउन थालेका छन् । राज्यभित्र सीमित महिलाहरु अन्य राज्यमा तथा काश्मिरभित्रै पनि राम्रो पदमा पुगेका छन् । पुरुषसरह विभिन्न अवसरहरु पाएका छन् ।
यसैमा आधारित रहेका काश्मिरको फिल्म पनि बनेको छ । काश्मिरकै एक मुश्लिम र अर्की पण्डित महिलाले काश्मिरको शान्ति र स्थिरता वृतिचित्रमार्फत प्रस्तुत गरेका छन् ।
डेनिस रेन्जु द्वारा लिखित र निर्देशित र सह-निर्माता सुनयना काचरुले १० मिनेटको छोटो वृत्तचित्रमा पछिल्लो काश्मिर अवस्था र आएको परिवर्तन बुझाउने प्रयास गरेका छन् । काश्मिरमा अहिले राजनीति र घृणाको अवस्था बदलिएको छ ।
सुनयना र रेन्जुको अनुभवमा अहिले काश्मिर परिवर्तन भएको छ । काश्मिरी पडितलाई थातथलो छोड्न बाध्य पार्ने अवस्था, हिंसा र आतंकवादको अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । यो फिल्मले बेलायतमा पनि प्रिमियर भएर सुधारिएको कश्मीर वृत्तचित्रमा पाउँदा दर्शकबाट प्रशंसा बटुलेको थियो ।
विश्वविद्यालयमा पहिलो महिला उपकुलपति
काश्मिरको कुरा गर्ने हो भने श्रीनगरले इतिहासमै पहिलो महिला कुलपति पाएको छ । यो महिला क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । प्रोफेसर निलोफर खानले शुक्रबार कश्मीर विश्वविद्यालयको पहिलो महिला उपकुलपतिको रूपमा पदभार ग्रहण गरेकी छन् ।
एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् र प्रशासक, प्रोफेसर निलोफरसँग ३० वर्ष लामो शिक्षण अनुभव छ । उनले कश्मीर विश्वविद्यालयको कर्पोरेट जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक र प्रशासनिक क्षमताहरूमा सेवा गरिसकेकी छन् । जसमा डीन कलेज विकास परिषद, रजिस्ट्रार, एप्लाइड साइंस र टेक्नोलोजीका डीन संकाय र निर्देशकहरू छन् । उनले युनिभर्सिटीको पहिलो महिला डीन विद्यार्थी कल्याण र महिला अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको संस्थापक निर्देशकको गौरव पनि प्राप्त गरिसकेकी छन् ।
प्रा निलोफर विश्वविद्यालय काउन्सिल, युनिभर्सिटी सिन्डिकेट (केयू), युनिभर्सिटी सिन्डिकेट (जम्मु युनिभर्सिटी), एकेडेमिक काउन्सिल, फाइनान्स कमिटी लगायत विश्वविद्यालयका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने निकायको सदस्य रहेकी छन् । उनी विद्यार्थी गुनासो समिति केयूको अध्यक्ष र कश्मीरको केन्द्रीय विश्वविद्यालयको आन्तरिक अनुपालन समितिको सह-अध्यक्ष अधिकारी र आन्तरिक गुनासो समिति केयूको अध्यक्ष पनि भइन् ।
प्रा. निलोफरले प्रा. तलत अहमदबाट उपकुलपतिको पदभार ग्रहण गरेपछि विश्वविद्यालय प्रहरीको टोलीले उनलाई नयाँ प्रशासनिक खण्डको प्राङ्गणमा गार्ड अफ अनर दिएको थियो । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रा. निलोफरले केयूको प्रथम महिला उपकुलपतिको रुपमा सेवा गर्ने अवसर दिएकोमा कुलपति मनोज सिन्हालाई धन्यवाद ज्ञापन गरिन् ।
उनले विद्यार्थी समुदायको हित आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा पर्ने बताइन् । "मेरो कार्यालयको ढोका हाम्रा विद्यार्थी र अनुसन्धान विद्वानहरूका लागि सधैं खुला रहनेछ। म उनीहरूको आवश्यकता र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि बारम्बार अन्तरक्रियामा संलग्न हुनेछु, "उनले भनिन् ।
कबड्डीको कोचमा पनि काश्मिरी महिला
यी त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । पछिल्लो समय जम्मु काश्मिरका महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा अगाडि आउन थालेका छन् । अवसर पाएर त्यसमा खरो उत्रेका छन् । विगतमा हत्या आतंक बलात्कार र घुम्टोभित्र प्रताडित काश्मिरी महिलाहरु अहिले खुला रुपमा हिँड्ने र सामाजका थुप्रै क्षेत्रमा लिड गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
जेठ ७, २०७९ शनिवार १८:००:५४ बजे : प्रकाशित